Akhriso”6 Arrimood Oo Kugu Khasbaya In Aad Cabitaanka Biyaha Badsato, Caadayso Cabitaanka Biyaha Si Aad Caafimaad Habboon U Hesho | Berberatoday.com
Akhriso”6 Arrimood Oo Kugu Khasbaya In Aad Cabitaanka Biyaha Badsato, Caadayso Cabitaanka Biyaha Si Aad Caafimaad Habboon U Hesho
Hargeysa(Berberatoday.com)-Si kasta oo dhakhaatiirteena Caafimaadku innoogu waaniyaan in aan badsanno cabitaanka biyaha ugu yaraana aan 24-kii saacadood cabo 8 koob oo biyo ah haddana in badan oo dadkeena ka mid ah waxa aad ugu adag in ay caado ka dhigtaan cabitaanka badan ee biyaha. Ilaahay wuxuu biyaha ka dhigay nolosha noolaha oo idil, waxaa intaa sii dheer in jidhka bani aadamku 60% uu biyo ka samaysan yahay, muhiimna u yahay shaqo kasta oo jidhka ka socota.
Haddii ay biyuhu jidhka ku yaraadaan waxaa ka dhasha xanuunno badan oo aan la tiro-koobi karin, haddii uu fuuqbax dhacana Nolosha qofku waa halis waanu dhiman karaa!.
Faa’iidooyinka Biyaha Waxa Ka Mid Ah:
1- Biyuhu Waxa Ay Dheelli-tiraan Dheecaannada Jidhka Ku Jira
2- Biyuhu Waxay Ka Qeyb Qaataan Kontoroolka Tamarta Jidhka:
3- Biyuhu Waxay Awood Siiyaan Muruqyada Jidhka:
4- Biyuhu Waxay Quudiyaan Oo Qurxiyaan Maqaarka Jidhka:
5- Biyuhu Waxay Caawiyaan Shaqada Kelyaha:
“Haddii Cabitaanka Biyuhu Kugu Yaryihiin Waxaad Halis Ugu Jirtaa In Ay Dhagaxaan Ku Samaysmaan Kelyahaaga”
6- Biyuhu Waxay Hagaajiyaan Shaqada Mindhicirrada: cabitaanka biyuhu waxay ka hortagtaan calool-istaagga, taas oo jidhka u leh faa’iidooyin badan oo aan la soo koobi karin, waxay kaloo badbaadiyaan unugyada mindhicirradu in aanay dhaawacmin.
Fiirro Gaar Ah:
Waxaa muhiim ah in la ogaado in cabitaanka biyaha nadiifta ahi aanay baddalkooda gali Karin cabitaanada kale sida shaaha, sharaabka iyo dareerayaasha kalaba. Waxaan kaloo muhiim ah oo aan akhristaha ku boorrin lahaa in biyaha la cabo subaxii hore ay leeyihiin caafimaad badan. Soomaalida waxaa lagu tiriyaa ummadaha aan ku fiicneyn cabitaanka badan ee Biyaha taasaana keentay in ay in badani ka cawdaan kelyo xanuunka.
Ku Dadaal Cabitaanka Badan Ee Biyaha….Waa Daawo Aan Waxyeelo Lahayn
Biyaha diirran oo la cabo waxay leeyihiin faa’idooyin badan oo kala ah:
Dheefshiidka: Biyaha diirran oo subaxii hore la cabo waxay dheefshiidka ka nadiifiyaan waskahda, una diyaariyaan in quraacda ay si habsami le’ u shiidanto.
Calool-fadhiga: Biyaha diirran waxay caawiyaan mindhicirrada si ay saxarada u soo baxdo, sidaas ayay ku yareeyaan calool adeegga.
Xanuunka: Biyaha diirran oo la cabo waxay yareeyaan madax xanuunka iyo xanuunka dumarka ay dareemaan xilliga caadada, sababtuna waa in biyaha qandaca ah ay xididada maqaarka soo aadayo ay waasiciyaan, taasina waxay dabcisaa murqaha kogsan ee madaxa iyo dahbarka.
Miisaanka: Biyaha diirran ah waxay xakameeyaan culeeska qofka inkastoo isbadal dhakhso ah aanan lagu helin, laakiin haddii waxay cilmibaarayaashu sheegaan haddii lagu darsado liinta in ay kordhinayso fursada in miisaanku yaraado
Wareega dhiigga: biyaha diirran oo la cabo waxay firfircooni u yeelaan wareega dhigga, waana arrin muhiim u ah caafimaadka jirka.
Caafimaadka timaha: biyaha diirran oo la joogteeyo waxay kordhiyaan dhaldhalaalka timaha, waxayna ka hortagaan agoolka.
Maqaarka: Biyaha diirran oo la cabo waxay isbadal ku sameeyaan unugyada maqaarka, waxayna yareeyaan nabraha iyo findoobka wajiga ka soo baxo sida cilmibaaris ay sheegtay.
Cunaha iyo Sanka: Cabbudhka sanka iyo dhuunta waxaa lagaga hortagaa in subax kasta la cabo biyo diirran ah, weliba markii lagu darsado liin dhanaanta ayay faa’idadu badan tahay.
Hurdada: dadka badanaa dhib kala kulma inay dhakhso hurdo ku helaan waxaa lagula taliyaa inay biyo diirran ah cabaan cashada ka dib si ay hurdo u helaan.
Caabuqa: biyaha markii la kululeeyo oo la diiriyo waxaa yaraanayso fursada in jeermis aad biyaha ka qaadid maxaa yeelay kululeynta waxay jeermiska ka dishaa biyaha.
-Iska ilaali in aad cabtid biyo aad u kulul maxaayeelay dhuuntai yo jidiinka uma roono, laakiin waad qandacsan kartaa.
-Haddii aad u cabtid in miisaan iskaga ridid, ku dadaal in aad jimicsi ku dartid si faa’idadu u badato.
-Si faa’idooyinka sare u bataan, waxaa lagu taliyaa in biyaha kulul lagu darsado liin dhanaan aan sokor lahayn.
Biyaha wuxuu dheellitiraa dheecaannada jirka ku jira: dheecaanada ugu muhiimsan jirka ee laga sameeyo biyaha waxay ka qeyb qaataan dheefshiidka, dhuugist cunnada, wareega dhiigga, sameenta calyada, xambaaridda walxaha nafaqada si jirka loo gaarsiiyo iyo habaynta heerkulka jirka, intaasiba waa laga maarmaan in qofka uu helo si uu u noolaado. Jirka wuxuu ku dadaalaa sidii loo heli lahaa biyo ku filan sidaas awgeed eebe wuxuu maskaxda biniaadanka ku abuuray meel loogu talagalay in ay dareento oonka sidaas awgeedne qofka ku qasabto inuu biyo si degdeg ah ku raadsado si jirka howshiisa aysan hakad u galin, waxay kaloo qeybtaas maskaxda ay kontorooshaa meelo kale oo jirka ka tirsan sida kilyaha, iyadoo haddii oon yimaado kilyaha loo sheego in kaadida ay hakiso si loo badbaadiyo inta yar ee biyaha jirka ku hartay..
Biyaha waxay ka qeyb qaataan kontoroolka tamarta jirka: taas oo macnaheeda ah biyaha waxay buuxiyaan caloosha iyagoo aanan jirka ku soo kordhin wax miisaan saari kara, waana sababta ay dhakhaatiirta ugula taliyaan dadka raba in ay iscaateeyaan in ay badsadaan cunnooyinka ku badan biyaha.
Biyaha waxay awood siiyaan murqaha jirka: unugyada murqaha waa u muhiim in ay helaan biyo ku filan si ay shaqada joogtada ah u wadaan oo ah in ay jirka dhaqaajiyaan qeybihiisa kala duwan sidaas awgeed dadka cabitaanka biyaha ku yaryahay waxay dareemaan caajis, tabardarri iyo murqo xanuun, waana sababta dadka jimicsada loogula taliyo in ay biyo ku filan cabaan oo iyagoo ooman aysan jimicsi samayn maadaama murqaha ay dhaawacmi karaan.